Nametraka Volavolan-Dalàna “Fanafahana Amin’ny Tahotra” Ny Solombavambahoaka avy amin’ny Mpanohitra ao Serbia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2014 9:10 GMT
Vakio amin'ny teny русский, čeština , Français, বাংলা, Ελληνικά, Español, English
Solontena 19 avy amin'ny Antenimieram-Pirenena Serba no nanolotra volavolan-dalàna hiantoka ny olom-pirenen'i Serbia tsy hanan-tahotra. Na dia zo voaantoka ao amin'ny Lalampanorenan'ny Repoblikan'i Serbia aza ny fahafahana, dia misy ireo politisiana sasantsasany tao anatin'ny volana vitsivitsy izay no mamerin-dalana azy amin'ny alalan'ny fihoara-pahefana miharihary.
Pikantsarin'ny pejy ofisialin'ny volavolan-dalàna momba ny Fahafahana amin'ny tahotra, araka ny navoakan'ny mpitondratenin'ny Antenimieram-Pirenena Serba Gordana Čomić azy ao amin'ny Slideshare, nahazoana alalana.
Ny volavolan-dalàna dia avy amin'ny solontenan'ny vondron'ny mpanohitra ao amin'ny antenimiera, mpikambana ao amin'ny Antoko Demokraty (Demokratska stranka – DS) sy avy ao amin'ny Antoko Vaovao (Nova stranka – NS). Amin'ireo solotenam-bahoaka 250 ao amin'ny Antenimiera Serba, voafidy tamin'ny fifidianana parlemantera tamin'ny Marsa 2014, dia 158 no avy amin'ny Antoko Progresista Serba (Srpska napredna stranka – SNS), tarihin'ny Praiminisitra amin'izao fotoana izao Aleksandar Vučić. Matetika no hita amin'ny vaovao ny Praiminisitra Vučić sy ireo mpiara-miasa aminy nandritra ny taona 2014 noho ny fanindriana ny fampitam-baovao sy ny olon-tsotra. Vučić moa nandà ireny filazana ireny, saingy lasa miharihary ny fomban'ny mpikambana ao amin'ny kabinetrany sasantsasany.
Ny mpanao gazety Milena Knezevic nanoratra hoan'ny Index on Censorship tamin'ny fiandohan'ny taona 2014:
Ny volavolan-dalàna feno momba ny Fahafahana amin'ny Tahotra, nampidirina tamin'ny 20 Novambra 2014, dia nasehon'ny mpikambana ao amin'ny Antoko Demokraty sady Mpitondratenin'ny Antenimieram-Pirenena Serba Gordana Čomić ao amin'ny kaontiny Slideshare manokana. Ao anatin'ny tahirin-kevitra nampidirina ny fanazavana ny antony nitondrana ity volavola ity: